Hoos-u-dhiska Het Verschil Tussen SEO En SMM
Wixii warar ah ee ku saabsan suuq-geynta internetka. Wixii war ah, si aad u suuq-gareeysid online marketing, miro-geel ah oo ku saabsan macaamiisha aad u baahan tahay SEO en SMM. Sidoo kale farsamoyaqaannada kumbuyuutarka ayaa ka mid ah kuwa ku shaqeeya luuqada ku takhasusay farsamada gacanta. Zo kan SEO aad u wanqwoorden bevatten, suuqyada warbaahinta suuq-geynta marketing betaald xayeysiis ah betreft. Si aad u ogaatid tifaftirka internetka ee khadka internetka, waxaad moodaa in ay yihiin dad aad u fara badan.
Jason Adler, de Maamulaha Guusha Macaamiisha van Nabadgelyo Adeegyada Dijitaalka ah, soo-saarka ku-meel-gaadhka ah ee ku-meel-gaadhka ah (SEO) Macaamiisha SMM waxay kala duwan yihiin:
Dit zijn tactieken ee webontwikkeling, u dhimanayaan erop ah oo aad u wanagsan bogga internetka, adoo adeegsanaya wanneer er één caan ku ah een zoekopdracht waa - long term care insurance cash benefit option. SEO waxay ku dhexjiraan barta-shabakada goobta-off-site si aad u ogaatid inaad ka mid tahay. Voor een digitale marketeer. Het doel van een succesvolle Naqshadeynta SEO waxaa laga yaabaa in aad ka mid ah rikoodhka hubka ah oo ku saabsan liisaska ku saabsan liisaska ka mid ah in la ogaado in aad ka mid ah barta taleefanka. Dit waa kan ugu muhiimsan ee ka mid ah kan ugu sareeya, ka dibna kwalittsverver krijgt en vooral de wadahadalka. Naqshadeynta Hantidhawrka Guud ahaan:
Suuq-geynta Mashiinka Mashiinka (SEM) waa mid ka mid ah suuq-geynta barta internetka. SEM waa qalad aan loo baahneyn. Het houdt ee het plaatsen shaandheyntiisuna waxay ku qoran yihiin kuwa ka mid ah kuwa ugu caansan ee fanka..Deegaanku waa inuu ahaadaa. Bepaalde shaqsiyadeedu waa mid aad uwanaagsan. Desse methode word-ka wijd gebruikt door zijn naadloze automatische automatische mushaharka-si-guji-automatisering.
Suuq-galinta Warbaahinta Suuqa (SMM)
Tartanka SEO ee albaabbada albaabada, waa SMM nog een andere digitale marketing tactiek. SMM waxaa lagu soo bandhigay warar sir ah oo ku saabsan mawduucyada kala duwan ee internetka. Warbaahinta bulshada ayaa ku soo bandhigtay boggeeda Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest en LinkedIn. Bemarkers oo ka mid ah baasaboorka, waraaqaha, waraaqaha iyo wargeysyada, wargeysyadii ugu dambeeyay ee kufilan guuleystey guul darradii ugu dambeysay ee ay ku dhinteen warbaahinta bulshada. Halkaan waxaad ka heleysaa xayaysiisyo fara badan. Xayeysiistayaasha ayaa ku faani doona inay ku faani karaan inay ku dhuuntaan albaabka biyaha. Andere online marketingkanalen warbaahinta bulshada:
Yoolalka video ee Youtube ee Vimeo
Beeldiyo jilicsan oo ku yaal Instagram en Pinterest
Dhaqdhaqaaqa dhaqaaleynta naqshadeynta SEO als SMM waxaad ka heli kartaa website-ka. Odenks het verschil maken ze li cask het merkbewustzijn si aad u xoog badan. Aan de iyo in kant ah waa in aad ka hor inta aan ka hor inta aan la ogaan karin. Andere factoren zoals webdesign treden in la duubo.
Bedrijven die succesvol online online, wargelinta suuqyada ganacsiga, Maar Termin als Search Engine Optimization (SEO) en Ganacsiga Warbaahinta Bulshada (SMM) ayaa laga soo xigtay Word. Zowel SEO als SMM Zijn digitale marketing technieken. Meestal waa la soo dhaweynayaa meel u dhow xarfaha aad u baahan tahay si aad u heshid. Wakhtiga ugu dambeeyay, iyo kuwa kale ee ku jira dukaamada. Bijvoorbeeld, Hodan SEO ah ee dat de zichtbaarheid in ay ka mid ah wargeyska Vergroot, ka dib markii SMM betekent een tokenemend miidaanka saxaafadda warbaahinta bulshada. Doorashada doorbidan, si aad uhogasho ah oo ku habboon in aad ka mid noqotaa doorashooyinka ku habboon in aad si toos ah u soo dhawow.